Brain – စာမကျြနှာ2– Healthy Life Journal
ဟင်းနုနယ်ရွက်ကို တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် စားခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်ကို ၁၁ နှစ်ခန့် ပိုမိုနုပျိုစေနိုင်
ကိုထက် ဟင်းနုနယ်ရွက်နဲ့ တခြားအစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ပုံမှန်စားလေ့ရှိသူတွေက အသက်ကြီးတဲ့အထိ ဦးနှောက်ထက်မြက်စေကြောင်း လေ့လာမှုတစ်ခုအရ သိရပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ဟင်းနုနယ်ရွက် တစ်ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ကြိမ်မျှ စားတဲ့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေက ဦးနှောက်အစွမ်း ၁၁ နှစ်ကြာ နုပျိုနေတတ်ပါတယ်။ အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို...
Q. ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုက ဘယ်အချိန်က စတင်ဖြစ်ပေါ်လဲ ဆရာမ။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) A. ကလေးငယ်တွေရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာ သူ့ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်ကတည်းက စပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ငါးလက စတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာဆို ဦးနှောက်စဖြစ်လာမယ့်...
သူငယ်ပြန်မှတ်ဥာဏ်လျော့နည်းရောဂါမဖြစ်စေဖို့ ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုဂရုစိုက်သင့်သလဲ . . .
(၁) တတ်နိုင်သမျှ သကြားလျှော့စားပါ။ (၂) ဗီတာမင်ဒီစစ်ဆေးပါ။ လိုအပ်ရင် ဖြည့်တင်းပါ။ (၃) ငါးကြေးဆီ မှီဝဲပါ။ (၄) စပျစ်သီး၊ ဘလူးဘယ်ရီသီး စတဲ့ အသီးအနှံ တွေကို စားပေးပါ။ (၅) နေ့တိုင်းဦးနှောက်ကို အလုပ်ပေးပါ။ ဘာတွေလုပ်ပေးသင့်သလဲဆိုရင် တရားထိုင်တာ၊...